The Resurrection: Ithemba Lokwenene Ngabantu Obathandayo Abafileyo | Okufundiswa YiBhayibhile
Sazi njani ukuba uvuko luza kubakho ngokwenene?
Uvakalelwa njani uYehova ngokuvusa abafileyo?
Ngoobani abaza kuvuswa?
1-3. Luluphi utshaba olusileqayo sonke, yaye kutheni ukuhlolisisa oko kufundiswa yiBhayibhile kuya kusizisela isiqabu?
KHAWUZITHELEKELELE ubaleka utshaba olukhohlakeleyo. Lomelele yaye lunamendu kunawe. Uyazi ukuba lukhohlakele kuba uye walubona lubulala abanye babahlobo bakho. Nakubeni ubaleka ngamandla akho onke, kodwa luya lusondela ngokusondela. Uphelelwa lithemba. Kodwa ngequbuliso, kuthi gqi ecaleni kwakho umntu oze kukuhlangula. Unamandla ngakumbi kunolu tshaba lwakho, yaye uthembisa ukuba uza kukunceda. Kutsho kuthi qabu emva koko!
2 Inyaniso ikukuba, lukho utshaba olunjalo olukuleqayo. Sonke sileqwa lolo tshaba. Njengoko sifundile kwisahluko esingaphambili, iBhayibhile ithi ukufa kulutshaba. Akukho namnye kuthi unokukubaleka okanye akoyise. Inkoliso yethu iye yalubona olu tshaba lubulala abantu esibathandayo. Kodwa uYehova unamandla ngakumbi lee kunokufa. UnguMhlanguli onothando osele esibonisile ukuba unako ukuloyisa olu tshaba. Yaye uthembisa ukuba uza kulubhangisa ngonaphakade utshaba olukukufa. IBhayibhile ifundisa oku: “Olokugqibela utshaba oluya kutshitshiswa kukufa.” (1 Korinte 15:26) Ziindaba ezimnandi ezo!
3 Makhe sihlolisise ngokufutshane indlela olusichaphazela ngayo utshaba olukukufa. Oku kuya kusinceda siqonde nto ithile eya kusivuyisa. Kaloku, uYehova uthembisa ukuba abafileyo baza kuphila kwakhona. (Isaya 26:19) Baza kuvuswa, babuyele ebomini.
XA UMNTU ESIMTHANDAYO ESIFA
4. (a) Kutheni indlela avakalelwa ngayo uYesu ngokufa komntu othandekayo isifundisa ngendlela avakalelwa ngayo uYehova? (b) Ngoobani ababa ngabahlobo abakhethekileyo bakaYesu?
4 Ngaba wakha wafelwa ngumntu omthandayo? Umele ukuba weva intlungu nosizi olunganyamezelekiyo. Ngamaxesh’ anjalo simele sifune intuthuzelo eLizwini likaThixo. (2 Korinte 1:3, 4) IBhayibhile isinceda siqonde indlela uYehova noYesu abavakalelwa ngayo ngokufa. UYesu, owayengumfanekiselo ogqibeleleyo kaYise, wayeyazi indlela ekubuhlungu ngayo ukufelwa. (Yohane 14:9) Xa eseYerusalem, uYesu wayedla ngokutyelela uLazaro noodadewabo, uMariya noMarta, ababehlala kwidolophu ekufutshane yaseBhethani. Baba ngabahlobo abakhulu. IBhayibhile ithi: “UYesu wayemthanda uMarta nodadewabo noLazaro.” (Yohane 11:5) Kodwa uLazaro wafa, njengokuba sifundile kwisahluko esingaphambili.
5, 6. (a) Wasabela njani uYesu xa wayekunye nentsapho kwanezihlobo ezazililela uLazaro? (b) Kutheni kusikhuthaza ukuba buhlungu kukaYesu?
5 Wavakalelwa njani uYesu ngokufa komhlobo wakhe? Ingxelo isixelela ukuba uYesu walila kunye nezalamane kwanezihlobo zikaLazaro. Wathi akubona intlungu ezikuyo, akakwazi ukuzibamba. “Wagcuma emoyeni, wakhathazeka.” Emva koko “zasuka zathi waxa iinyembezi kuYesu.” (Yohane 11:33, 35) Ngaba intlungu kaYesu itheth’ ukuba wayengenalo ithemba? Akunjalo. Enyanisweni, uYesu wayesazi ukuba kungekudala kwakuza kwenzeka into emangalisayo. (Yohane 11:3, 4) Sekunjalo, wayiva intlungu nosizi olubangelwa kukufa.
6 Noko ke, ukuba buhlungu kukaYesu kuyasikhuthaza. Kusifundisa ukuba uYesu kwanoYise uYehova, bakuthiyile ukufa. Kodwa uYehova uThixo unawo amandla okuloyisa olo tshaba! Makhe sibone oko uThixo wanika uYesu amandla okuba akwenze.
7, 8. Kutheni imeko kaLazaro yayinokubonakala inganiki themba ebantwini, kodwa yintoni eyenziwa nguYesu?
7 ULazaro wayengcwatywe emqolombeni, yaye uYesu wacela ukuba lisuswe ilitye elalivale loo mqolomba. UMarta wala ngenxa yokuba uLazaro wayeneentsuku ezine efile, nomzimba wakhe sele uqalise ukubola. (Yohane 11:39) Kwakubonakala kungekho themba tu kwaphela!
Ukuvuswa kukaLazaro kwabangela uvuyo olukhulu—Yohane 11:38-44
8 Laqengqwa lasuka ilitye, waza uYesu wadanduluka ngamandla wathi: “Lazaro, phuma!” Kwenzeka ntoni? “Waphuma umntu lowo obefile.” (Yohane 11:43, 44) Ngaba unokuyithelekelela indlela abavuya ngayo abantu ababelapho? Izalamane zikaLazaro, abahlobo, nabamelwane, bonke babesazi ukuba ufile. Kodwa nanku ngoku emi phambi kwabo—esengulaa mntu bamaziyo nabamthandayo. Kumele ukuba kwabamangalisa ngokwenene oku. Ngokuqinisekileyo abaninzi bamanga uLazaro benemincili. Ngokwenene ukufa kwakoyisiwe!
UEliya wavusa unyana womhlolokazi—1 Kumkani 17:17-24
9, 10. (a) UYesu wenza njani kwacaca ukuba wayewafumana phi amandla okuvusa uLazaro? (b) Ziziphi ezinye zeengenelo zokufunda ngeengxelo zokuvuswa kwabantu ezifumaneka eBhayibhileni?
9 UYesu akazange athi uwenze ngokwakhe lo mmangaliso. Kumthandazo awawenza ngaphambi kokuba abize uLazaro, wakwenza kwacaca ukuba nguYehova omvusileyo. (Yohane 11:41, 42) UYehova wayengaqali ukuwasebenzisa ngale ndlela amandla akhe. Ukuvuswa kukaLazaro kungomnye wemimangaliso esithoba yokuvuswa kwabantu echazwe eLizwini likaThixo. * Kuvuyisa ngokwenene ukufunda ezi ngxelo. Zisifundisa ukuba uThixo akanamkhethe, kuba abo bavuswayo babequka abantwana nabantu abakhulileyo, amadoda namabhinqa, amaSirayeli nabangengomaSirayeli. Yaye zikwachaza nendlela oku okwabavuyisa kakhulu ngayo abantu! Ngokomzekelo, xa uYesu wavusa enye intombazana ekufeni, abazali bayo ‘bathabatheka ngokugqithiseleyo.’ (Marko 5:42) Ngokwenene, uYehova wayebazisele uvuyo ababengasokuze balulibale.
Umpostile uPetros wavusa ibhinqa elingumKristu uDorkas—IZenzo 9:36-42
10 Noko ke, abantu ababevuswe nguYesu baphinda bafa emva kwethuba. Ngaba oku kuthetha ukuba kwakungabalulekanga nganto ukuvuswa kwabo? Akunjalo. Ezi ngxelo zeBhayibhile ziqinisekisa inyaniso ebalulekileyo yaye zisinika ithemba.
UKUFUNDA KWIINGXELO ZOKUVUSWA KWABANTU
11. Ingxelo engokuvuswa kukaLazaro iyiqinisekisa njani inyaniso echazwe kwiNtshumayeli 9:5?
11 IBhayibhile ifundisa ukuba abafileyo “abazi nto konke konke.” Akukho ndawo baphila kuyo. Ingxelo ephathelele uLazaro iqinisekisa indlela okuyinyaniso ngayo oku. Ekuvukeni kukaLazaro, ngaba wayolisa abantu ngokubachazela ukuba kunjani ezulwini? Okanye ngaba waboyikisa ngokubachazela ngentuthumbo yesihogo somlilo? Akunjalo. IBhayibhile ayibonisi ukuba uLazaro wathetha nantoni na eyelele apho. Ebudeni beentsuku ezine zokufa kwakhe, ‘wayengazi nto konke konke.’ (INtshumayeli 9:5) ULazaro wayelele nje ekufeni.—Yohane 11:11.
12. Sinokuqiniseka njani ukuba uLazaro wavuswa ngokwenene?
12 Kwakhona ingxelo ephathelele uLazaro isifundisa ukuba uvuko luyinto yokwenene, aluyontsomi nje kuphela. UYesu wamvusa uLazaro phambi kwesihlwele esazibonela ngamehlo oku. Kwaneenkokeli zonqulo ezazimthiyile uYesu, azizange ziwukhanyele lo mmangaliso. Kunoko zathi: “Yintoni na emasiyenze, ngenxa yokuba lo mntu [uYesu] wenza imiqondiso emininzi?” (Yohane 11:47) Baninzi abantu abeza kubona uLazaro ovusiweyo. Yaye abaninzi kubo bakholwa kuYesu. Ukubona kwabo uLazaro kwabenza baqiniseka ukuba uYesu wayethunyelwe nguThixo. Obu bungqina babunamandla kangangokuba ezinye iinkokeli zonqulo ezikhohlakeleyo zamaYuda zenza iyelenqe lokubulala uYesu kunye noLazaro.—Yohane 11:53; 12:9-11.
13. Yintoni esiqinisekisayo ukuba ngokwenene uYehova unako ukubavusa abafileyo?
13 Ngaba akukho ngqiqweni ukukholelwa ukuba uvuko luyinto enokwenzeka? Akunjalo, kuba uYesu wafundisa ukuba ngenye imini “bonke abo bakumangcwaba enkumbulo” baza kuvuswa. (Yohane 5:28) UYehova unguMdali wazo zonke izinto eziphilayo. Ngaba kufanele kube nzima ke ukukholelwa ukuba unokubenza baphile kwakhona abo bafileyo? Kambe ke, oku kuya kuxhomekeka kwinkumbulo kaYehova. Ngaba unokubakhumbula abantu esibathandayo abafileyo? Cinga nje ngezigidi zezigidi zeenkwenkwezi ezisesibhakabhakeni, nokuthi uThixo uzazi zonke ngamagama! (Isaya 40:26) Ngoko uYehova uThixo unokuzikhumbula zonke iinkcukacha ngabo bathandekayo bafileyo, yaye ukulungele ukubabuyisela ebomini.
14, 15. Uvakalelwa njani uYehova ngokubuyisela abafileyo ebomini, njengoko kuboniswe koko kwathethwa nguYobhi?
14 Kodwa uYehova uvakalelwa njani ngokuvusa abafileyo? IBhayibhile ifundisa ukuba unomnqweno wokubavusa. Indoda ethembekileyo uYobhi yabuza yathi: “Ukuba indoda eyomeleleyo iyafa ngaba inokuphila kwakhona?” UYobhi wayethetha ngokulinda engcwabeni de kufike ixesha lokuba uThixo amkhumbule. Wathi kuYehova: “Uya kubiza, ndisabele. Uya kuwulangazelela umsebenzi wezandla zakho.”—Yobhi 14:13-15.
15 Khawucinge nje ngako oku! Eneneni uYehova uyakulangazelela ukubabuyisela ebomini abo bafileyo. Ngaba akukhuthazi na ukwazi ukuba uYehova uvakalelwa ngaloo ndlela? Kodwa kuthekani ngovuko oluzayo? Ngoobani abaza kuvuswa, yaye bevuselwa phi?
“BONKE ABO BAKUMANGCWABA ENKUMBULO”
16. Abafileyo abaza kuvuswa baza kuphila ubomi obunjani?
16 Iingxelo zeBhayibhile eziphathelele uvuko zisifundisa lukhulu ngovuko oluzayo. Abantu abavuswayo bavuselwa apha emhlabeni, baza baphila kwakhona kunye nabo babathandayo. Luya kuba njalo ke novuko oluzayo—kodwa lona luya kuphucuka ngakumbi. Njengoko sifundile kwiSahluko 3, injongo kaThixo kukuba wonke umhlaba ube yiparadesi. Ngoko abo bafileyo abayi kuvuselwa kwihlabathi elizaliswe ziimfazwe, ulwaphulo-mthetho nokugula. Baza kuvuswa benethemba lokuphila ngonaphakade emhlabeni onoxolo nolonwabo.
17. Luza kuba lukhulu kangakanani uvuko?
17 Ngoobani abaza kuvuswa? UYesu wathi ‘bonke abo bakumangcwaba enkumbulo baza kuliva ilizwi lakhe yena Yesu, baze baphume.’ (Yohane 5:28, 29) Ngokufanayo, iSityhilelo 20:13 sithi: “Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo abalapho.” “IHadesi” ibhekisela kwingcwaba eliqhelekileyo loluntu. (Bona iSihlomelo, esikwiphepha 212-13.) Amangcwaba aza kuqongqothwa. Onke amawaka ezigidi zabantu abakuwo aza kuphila kwakhona. Umpostile uPawulos wathi: “Kuza kubakho uvuko lwamalungisa nabangengomalungisa.” (IZenzo 24:15) Kuthetha ukuthini oko?
EParadesi abafileyo baza kuvuswa baze baphile kwakhona nabo babathandayo
18. Aquka oobani “amalungisa” aza kuvuswa, yaye eli themba linokukuchaphazela njani wena ngokobuqu?
18 “Amalungisa” aquka abantu abaninzi esifunda ngabo eBhayibhileni ababephila ngaphambi kokuza kukaYesu emhlabeni. Usenokucinga ngoNowa, uAbraham, uSara, uMoses, uRute, uEstere, nabanye abaninzi. Amanye ala madoda namabhinqa okholo kuthethwa ngawo kumaHebhere isahluko 11. Kodwa “amalungisa” aquka nabakhonzi bakaYehova abaye bafa ebudeni bexesha lethu. Ngenxa yethemba lovuko, asikoyiki ukufa.—Hebhere 2:15.
19. Ngoobani “abangengomalungisa,” yaye liliphi ithuba uYehova aza kubanika lona ngobubele?
19 Kuthekani ngabo bonke abantu ababengamkhonzi okanye bengamthobeli uYehova ngenxa yokuba babengamazi? La mawaka ezigidi zabantu “abangengomalungisa” akayi kulityalwa. Nawo aza kuvuswa aze anikwe ithuba lokufunda ngoThixo oyinyaniso aze amkhonze. Ebudeni beminyaka eliwaka, abafileyo baza kuvuswa baze banikwe ithuba lokukhonza uYehova kunye nabantu abathembekileyo abasemhlabeni. Iya kuba lixesha elimnandi kakhulu elo. Eli xesha iBhayibhile ilibiza ngokuba yiMini Yomgwebo. *
20. Yintoni iGehena, yaye ngoobani abaya kuyo?
20 Ngaba oku kuthetha ukuba wonke umntu owayekhe waphila uza kuvuswa? Akunjalo. IBhayibhile ithi abanye babo bafileyo ‘baseGehena.’ (Luka 12:5) Igama elithi Gehena lisusela kwigama lendawo yokulahla inkunkuma eyayingaphandle kweYerusalem yamandulo. Kuyo kwakutshiswa izidumbu kunye nenkunkuma. Abantu abafileyo ababelahlwa apho babegqalwa ngamaYuda njengabangakufanelekelanga ukungcwatywa nokuvuswa. Ngoko iGehena ifanekisela intshabalalo kanaphakade. Nangona uYesu enenxaxheba ekugwebeni abaphilileyo nabafileyo, eneneni nguYehova onguMgwebi. (IZenzo 10:42) Akayi kubavusa abo abagweba njengabangendawo nabangakulungelanga ukuguquka.
21, 22. (a) Luluphi olunye uhlobo lovuko olukhoyo? (b) Ngubani owokuqala owavusela kubomi bomoya?
21 IBhayibhile ibhekisela kolunye uhlobo lovuko, olokuphila njengesidalwa somoya ezulwini. Mnye kuphela umzekelo wolu hlobo lovuko ochaziweyo eBhayibhileni, ngokaYesu Kristu.
22 Emva kokuba uYesu ebulewe, uYehova akazange avumele ukuba lo Nyana wakhe uthembekileyo ahlale engcwabeni. (INdumiso 16:10; IZenzo 13:34, 35) UThixo wamvusa uYesu, kodwa akamvusanga engumntu. Umpostile uPetros uchaza ukuba uKristu ‘ubulewe esenyameni, kodwa wenziwa waphila esemoyeni.’ (1 Petros 3:18) Enyanisweni yayingummangaliso omkhulu lowo. UYesu wavuswa engumntu womoya onamandla! (1 Korinte 15:3-6) Yaye wayengowokuqala ukufumana olu hlobo luzukileyo lovuko. (Yohane 3:13) Kodwa wayengazi kuba ngowokugqibela.
23, 24. Ngoobani ‘abangumhlambi omncinane’ kaYesu, yaye bangaphi?
23 Ngaphambi kokuba abuyele ezulwini, uYesu waxelela abalandeli bakhe abathembekileyo ukuba wayeza ‘kubalungiselela indawo’ apho. (Yohane 14:2) UYesu wababiza abo baza kuya ezulwini ngokuba ‘ngumhlambi wakhe omncinane.’ (Luka 12:32) Bangaphi ababumba eli qela lincinane lamaKristu athembekileyo? KwiSityhilelo 14:1 umpostile uYohane uthi: “Khangela! ndabona iMvana [uYesu Kristu] imi phezu kweNtaba yeZiyon, kumi nayo ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka linalo igama layo negama loYise libhaliwe emabunzini alo.”
24 La maKristu ali-144 000, naquka abapostile abathembekileyo bakaYesu, avuselwa kubomi basezulwini. Avuswa nini? Umpostile uPawulos wathi avuswa ngexesha lobukho bukaKristu. (1 Korinte 15:23) Njengoko uza kufunda kwiSahluko 9, siphila ebudeni belo xesha ngoku. Ngoko abambalwa abasaseleyo kwabo bali-144 000 abathi bafe ngexesha lethu, bavuselwa ngesiquphe kubomi basezulwini. (1 Korinte 15:51-55) Kodwa inkoliso yabanye abantu, inethemba lokuvuselwa kwiParadesi esemhlabeni.
25. Siza kuhlolisisa ntoni kwisahluko esilandelayo?
25 Eneneni, uYehova uza kuloyisa utshaba lwethu olukukufa, aze alutshabalalise ngonaphakade! (Isaya 25:8) Kodwa usenokuzibuza ukuba, ‘Abo bavuselwa ezulwini baza kwenza ntoni apho?’ Baza kuba yinxalenye yorhulumente woBukumkani obumangalisayo basezulwini. Siza kufunda ngakumbi ngalo rhulumente kwisahluko esilandelayo.
^ isiqe. 9 Nazi ezinye iingxelo zokuvuswa kwabantu: 1 Kumkani 17:17-24; 2 Kumkani 4:32-37; 13:20, 21; Mateyu 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; IZenzo 9:36-42; 20:7-12.
^ isiqe. 19 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngeMini Yomgwebo nangendlela ekuza kugwetywa ngayo, nceda ubone iSihlomelo, kwiphepha 213-15.
Iingxelo zeBhayibhile eziphathelele uvuko zisinika ithemba eliqinisekileyo.—Yohane 11:39-44.
UYehova uyakulangazelela ukubabuyisela ebomini abo bafileyo.—Yobhi 14:13-15.
Bonke abo bakwingcwaba eliqhelekileyo loluntu baza kuvuswa.—Yohane 5:28, 29.
Ithemba Lokwenene Ngabantu Obathandayo Abafileyo (Inxalenye 2)